Sifundisa indlela my iPhone ukufaka apps simahla | IPhone iindaba
Faka (ziqhekeke) usetyenziso kwifomathi ye .ipa
UPablo Aparicio | | Iapps zokusebenza, Izifundo kunye neencwadana
Ukuba ndithe jailbreak Isinika ilizwe liphela elinokwenzeka, andifumani nto. Singatsiba izithintelo ezibekwe yiApple kwaye sifake izicelo eziluncedo kakhulu, nangona ezinye zikwanokuziphatha okuthandabuzekayo. Kwaye, sithetha ngokulungileyo nokungalunganga, nathi sinakho faka iiapps eziqhekekileyo ngaphandle kokuhlawula nesenti.
Ngokombono wam, i ubugqwetha abuxhamli mntu. Kumculo, isoftware kunye nezinye izinto ezifanayo, ukuba sonke siyaphanga siyakwenza ukuba umbhekisi phambili / umculi angabinakho ukuziphilisa ngento esiyithandayo, ke bayayeka ukuyenza kwaye asizukuyonwabela. Wonke umntu angenza into akholelwa kuye, kodwa ndiyibona injalo. Kwelinye icala, ukukwazi ukuvavanya izinto ngaphambi kokuba uzihlawule kunokuba ngumbono olungileyo. Oko kwathiwa, ngokulandelayo siza kukubonisa indlela yokufaka iifayile ze -ipa eziqhekekileyo kwi-iPhone yakho, i-iPod okanye i-iPad.
1 Uyifaka njani ipirated apps kwi-iPhone
1.1 Nge-software ye-iPhone
1.2 Nge iTunes
2 Ngaba iwaranti ilahlekile xa i-iPhone igqekeziwe?
3 Yeyiphi ingozi endibaleka kuyo ukuba ndiyamnqula u-iPhone?
4 Ndingazihlaziya iapps ze-iPhone ezitshutshisiweyo?
Uyifaka njani ipirated apps kwi-iPhone
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufaka i-Cydia tweak oya kuyifumana kwii-repositories ezingezizo (ndincoma repo.hackyouriphone.org). Imalunga ne AppSync kwaye, kuxhomekeka ukuba uza kuyifaka nini kwaye yeyiphi indawo yokugcina, uya kufumana enye okanye enye ingxelo. I-AppSync 9+, i-AppSync emanyeneyo okanye nayiphi na into oyikhethileyo ofuna ukuyibiza ngoku kufanele ukuba ibekho. Nje ukuba ifakwe, siya kuba neendlela ezimbini:
Le ndlela ayiyona elula, kodwa iyona nto ibalulekileyo kubasebenzisi abaninzi kuba inokwenza yonke into esuka kwi-iPhone.
Esi sesinye sezicelo zokuqala ezinye iindlela zokufaka0us Ekhoyo kwanangaphambi kokuba isicelo esidumileyo sokukhuphela kunye nokufaka usetyenziso lweepirate sinyamalale. Ukuyifaka, kuya kufuneka uye ku-http: //www.vshare.com nge-iPhone Safari kwaye ukhethe i icon yeapile.
I-AppSync iyakuvumela ukuba ufake usetyenziso kwisikhangeli esinye. Nje ukuba ufake, kufuneka khangela isicelo esifunwayo kwaye uyikhuphele. Unokubona amakhonkco, kwimeko apho kuya kufuneka ukhethe enye kwaye uqalise ukukhuphela ukuyifaka kamva.
AppCake: le sicelo indala kakhulu, kwaye ngokuchanekileyo eyenza ukuba ithembeke. Ukufakela iAppCake siya kuya kwiwebhu https://www.iphonecake.com kwaye enye intle ngokufanayo ne-vShare.
Zininzi ezinye izicelo, kodwa ezi zimbini zezona ndinokucebisa ngazo. AppAddict, endisiguqulele kwisiSpanish ngelo xesha, ndineengxaki zangaphakathi phakathi kwabaphuhlisi bazo ezenza kube nzima ukuyicebisa. Ngapha koko, ukuba andiphazami nabo baye banyamalala, ukuphelisa amanye amacandelo kwiAppCake.
Le yeyona ilula kwaye icetyiswayo. Iiwebhusayithi zeVhare kunye neAppCake zikwasivumela ukuba sikhuphele ifayile ye .ipa kwikhompyuter yethu. Nje ukuba ifayile ye .ipa ikhutshelwe, kufuneka siyenze cofa kabini malunga nayo ukuze sikwazi ukuyikopa kwi-iTunes. Kanye kwi-iTunes, kufuneka singqamane kuphela ne-iPhone yethu, i-iPod okanye i-iPad kunye ne-iTunes eza kusifakela yona. Akusekho nto.
Ukuba awufuni ukungqamanisa ne-iTunes, kukwakhona enye indlela onokuyikhuphela .ipa kwikhompyuter kwaye uyithumele kwi-iPhone nge-iFile ukuyivula ngeVhare okanye iAppCake. Oku kunokuba ngumbono olungileyo ukuba ifayile esifuna ukuyikhuphela inzima, kuba ukukhuphela kunye nokusetyenziswa kungathatha ixesha elide.
Ngaba iwaranti ilahlekile xa i-iPhone igqekeziwe?
Lo mbuzo awunampendulo icacileyo. Ndifanele njalo asilahli siqinisekiso xa utyhafisa i-iPhone. Ndithi "kucingelwa" kuba iApple inokwenza ingxaki ukulungisa i-iPhone ukuba siyophule, kodwa akunakulindeleka. Into eyaziwa ngokuba yi "hacking" i-iPhone kukuyiqhekeza ejele, equlathe ukuguqula isoftware yayo ukuze ikwazi ukwenza izinto ezingavunyelwanga sisixhobo esine-default operating system.
Kodwa masihambe ngamacandelo: sichaze ukuba yintoni jailbreakUninzi lwamazwe, njenge-United States, apho ikomkhulu le-Apple likhoyo, ithi ukwaphulwa kwejele kusemthethweni. Ukuba sithatha isigqibo sokwenza kwi-iPhone yethu, i-iPod touch okanye i-iPad, asizukuphulukana newaranti yesixhobo
Kwelinye icala, kwi-jailbreak isixhobo se-iOS kufuneka senze into eyaziwa ngokuba yi "flashing". Nangona kungenakulindeleka, njengoko siza kuchaza apha ngezantsi, singenza ukuba i-iPhone yethu ingaqali kwaye ingagqithi kwibhlokhi, kodwa singasoloko siyisa ku-Apple siyixelele okwenzekileyo kuthi ngokwenza olunye uhlobo ezibengezelayo: Ukuhlaziya inkqubo yokusebenza ngendlela eqhelekileyo, nokuba kungoku-iTunes okanye nge-OTA (Ngaphezulu komoya).
Yeyiphi ingozi endibaleka kuyo ukuba ndiyamnqula u-iPhone?
Njengoko sele kuchaziwe kwinqaku elidlulileyo, kusiko lwe-iPhone kuthiwa yi-jailbreak. Ngokuqhekeza isixhobo se-iOS esisifumanayo Ukufikelela kumsebenzisi omkhulu (ekwabizwa ngokuba yiRoot), esivumela ukuba senze uhlengahlengiso iApple engasivumeli ngokungagqibekanga. Ukuza kuthi ga ngoku yonke into ilungile. Ingxaki kukuba asizukuvula kuphela umnyango ukuze sikwazi ukwenza utshintsho kuthi, kodwa siza kuvula umnyango abanye abantu abanokungena kuwo.
Kwenzeka ntoni ke? Ewe, ekubeni sinenkululeko engakumbi, singasifaka isicelo esisengozini okanye i-tweak ngumsebenzisi okhohlakeleyo kwaye ufake ikhowudi enobungozi kunye nabo abeba ulwazi lwethu. Akuqhelekanga kakhulu, kodwa kunokwenzeka ngokwenene.
Kwelinye icala, njengoko benditshilo kwinqaku elidlulileyo, konke ukudanyaza kunokungena engxakini. Inqanaba lokungaphumeleli phantse alikho (enyanisweni andazi nangayiphi na imeko), kodwa kufuneka sinike ingxelo ngayo njengeyona inokwenzeka. Ukuba sifaka i-jailbreak kwaye ayinakuqala kwakhona, njengoko senditshilo, singayisa kwiVenkile yeApple kwaye sithi yenzekile kuthi xa sizama ukuhlaziya ingxelo ephezulu ye-iOS nge-iTunes okanye nge-OTA. Kodwa uza kuthini ukuba asinayo Apple Isitolo okanye ukusekwa okugunyazisiweyo kufutshane? Mhlawumbi kwezo meko, kungcono ukushiya izinto zinje.
Ndingazihlaziya iapps ze-iPhone ezitshutshisiweyo?
Ewe, kodwa ngokusengqiqweni hayi kwiVenkile yeApple. Ukuhlaziya isicelo esingasithenganga, kuya kufuneka sikwenze ngokukhuphela i -ipa entsha yeso sicelo kwaye siyifake ngaphezulu kwale sele sinayo. Ukuba sisebenzisa iapp efana neAppCake, yenza nje into esiyenzileyo xa siqala ukuyikhuphela: yikhangele, ufumane uhlobo olutsha, ukhuphele kwaye ulifake.
Singahlaziya isicelo Ukukhuphela .ipa entsha kwikhompyuter yethu, ngokunqakraza kuyo kabini kunye nokuvumelanisa ne-iTunes.
Njengoko benditshilo ngasentla, ubugqwetha abuxhamli mntu, ke kuya kufuneka wenze i ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kolwazi kwesi sifundo sincinci, njengokuvavanya usetyenziso ukuqinisekisa ukuba luyahlangabezana nokulindelweyo ngaphambi kokuhlawula into esingayaziyo ukuba siyayithanda okanye asiyithandi. Eyona nto isengqiqweni kukuhlawula izicelo esizithandayo, kuba siyakuvumela umphuhlisi ukuba aqhubeke nokuphucula. Ngaphandle koko, kwaye ukuba sonke besenze okufanayo, besizakuphela sisebenzisa inguqulelo ye-1.0 yesicelo ngasinye kwaye ngekhe sabona uhlaziyo olukhulu njengeTweetbot 4 okanye iReeder 3. Ngaba uyavumelana nam?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Faka (ziqhekeke) usetyenziso kwifomathi ye .ipa
Oko kuthatha ixesha elide, ixesha elide hehehehehe. Ndingomnye wabo bafake izicelo kwi-IPA ixesha elide kuba i-xD intle kakhulu. Ukuba akusoloko kufuneka sifake i-APP nge-SSH, kodwa i-IPA ingcono amaxesha aphindwe kaliwaka. XD
Ukuba umntu othile akamazi, kwenze oko ngaphandle kwamathandabuzo.
I-PS: -Kwi-Installer onayo kwelinye lamacandelo e-clubifone repo ufakelo lweselfowuni, ukuyifaka ngokuzenzekelayo kwi-installer ngaphandle kokwenza amanyathelo okutshintsha loo fayile nge-SSH
Ndenza yonke into kodwa i-kroll kwaye abanye abayifaki ...
Ikhonkco libonakala lingalunganga kwiFirefox.
Ndizamile ukufaka inkqubo oyitshoyo kuMfaki. Ndiyikhuphele iMonkey Ball kunye neSpore kwi-IPA kodwa ayizifaki ... Mhlawumbi zazingazange ziqhekeke ngaphambili?
Ukuthi kukho ubuncinci iimpazamo ezi-2 okanye okushiyekileyo kwisifundo kwaye oko ukuze kusebenze kufuneka ube ne-App EFANELEKILEYO esemthethweni elayishwe kwifowuni ye-iphone, akufuneki ukuba ihlawulwe, kufanelekile ukuba yenye yezasimahla, ukuba akunjalo unayo, kwenzeka ntoni xa ulayisha ii-ipas kwaye uqala ukuzivula, ivala kwangoko.
Ndikubeke ngendlela ekufuneka ubenze ngayo
Ndikuncamathisela isifundo ngendlela yokwenza kunye nokusetyenziswa kwe-ipa
1-. Khuphela ifayile ye "MobileInstallation" ebambekayo (Khuphela)
1-. Qhagamshela kwi-iPod / iPhone yethu ngeSSH.
Mbini-. Yiya kwisikhombisi «/ System/Library/PrivateFrameworks/MobileInstallation.framework»
3-. Sikopa kwaye sitshintshe ifayile esiyikhuphelileyo. Sinikezela i-775 njengexabiso lemvume.
4-. Senza incwadi entsha enegama "amaXwebhu" kwimikhombandlela kube kanye.
/ ngasese / var / Ifowuni
Sinikezela i-777 njengexabiso lemvume kwifolda kuzo zombini izikhombisi.
5-. Siqala kwakhona ukuchukumisa kwethu
7-. Ukufaka usetyenziso, sikhuphela i «.ipa», sicofa kabini kuyo, kwaye siyangqamanisa ukusuka kwi-iTunes ukuya kwi-iPod / iPhone yethu
Kwaye ngoku kusetyenziswa usetyenziso olufakwe yi-SSH
2-. Senza incwadi entsha enegama "amaXwebhu" kwimikhombandlela kube kanye.
3-. Sikhuphela umdlalo kwifomathi ye .ipa
4-. Sitshintsha ulwandiso lwefayile ukusuka «.ipa» ukuya «.zip», vula ifayile, uye kwi «Payload» ifolda kwaye ubone «.app».
5-. Vula ifolda "xxx.app"
6-. Idityaniswe kwi-iPod / iPhone yethu ngeSSH, sikopa ifolda «xxx.app» kulawulo / Izicelo, kwaye sabela i-775 njengexabiso lemvume
7-. Siqala kwakhona okanye siqala kwakhona ukuchukumisa kwethu
Qaphela: Awunakho ukufaka usetyenziso olufanayo ngezi ndlela zimbini, oko kukuthi, ukuba unesicelo se-app kwi-iPod / iPhone yakho kwaye ufuna ukuyifaka ngoku usebenzisa indlela ye- .ipa, qala ucime .app uze emva koko ungqamekise isicelo esivela kwi-iTunes.
Khumbula ukuba ngaphambi kokubeka naluphi na uqhekeko kufuneka sibeke ukhuphelo olusemthethweni kwi-AppStore, nokuba simahla, ukuba ayisivumeli ukuba sivule ezo sizibekileyo
Namhlanje_ i_iphone sitsho
I-Texuas ukuba ubulifundile inani lesi-3 ubuya kulibona
3-fakela usetyenziso lwasimahla kwivenkile yokuqala
Ngaba usifundile isifundo?
uyizamile, ndiyenzile ngenxa yeso sizathu ndayipapasha…
Kulungile, uxolo kuba bendingayifundanga, ndiyathandeka, ukuba kudala ndiyisebenzisa kwii-iPhones zam ezimbini kwaye zisebenza ngokugqibeleleyo kum, kungcono kwaye kulula ukuyenzela i-Ipa
Ngapha koko, ukwenza ifolda yamaxwebhu kunye nokunika imvume engama-777 kuzo zombini iifolda kunye nayo yonke imixholo yayo, andikayiboni kwisifundo, akunjalo?
Kuyacaca ukuba uyayiphambanisa inkqubo yokufaka usetyenziso kwi (app) fomathi ngenkqubo yokufaka (ipa)
Ewe, andazi, kodwa bendifaka izicelo ze-Ipa ukusukela ngala mini baphuma ngayo, kwaye bendisebenzisa i-iPhone ukusukela nge-9 kaSeptemba 2007, ndisebenzisa zonke iinguqulelo, nokuba kunjalo, mna ' Ndithumele izifundo ezimbini, enye yeyokusetyenziswa kwe-Ipa kunye nenye yezicelo ezifakwe yi-SSH, mna xa ezokuqala zaqhekeka usetyenziso lweVenkile ye App, njengoko wonke umntu azilayishayo yi-SSH kwaye kamva yi-Ipa, ngendlela yeetutorials Ukuba ndincamathisela yilezo zephepha laseRussia dosne lixhoma usuku ngalunye losetyenziso kwaye kamva laphazamiseka kwi-clubiphone nakwezinye iisayithi, andiyenzanga okanye ndiyilele ngokwam, ndiyikope njengoko injalo, kwaye nangona kuyinyani isicelo simahla UKUBA KWAKUKHO isifundo sakho, ifolda yamaxwebhu kunye neemvume ezingama-777 kuzo zombini iifolda zeMibhalo kunye nazo zonke iifayile eziqulethweyo, AKUKHO kwisifundo sokuqala kwaye zombini zilayishwe yi-Ipa kunye ne-SSH ifolda iyimfuneko ngokunjalo njengemvume, ngendlela yokutsho ukuba nini Abanye abantu khange basebenzele inyani elula yokungabhali ifolda yamaxwebhu ngoonobumba D, nangayiphi na imeko ndiyaphinda, oku kwindlela yokwenza kunye neemfuno kunye nezifundo ngendlela yokwenza ixesha elide endithumela kulo amaphepha ahlukeneyo, kunye nento endihamba nayo ndenza okuninzi, ke ndiyazi kakuhle ukuba isebenza njani kwaye kutheni ingasebenzi ebantwini.Nangona kunjalo, usacinga ukuba ndim odidekileyo kuba akukho nto…. Ndifuna nje ukufaka igalelo koko bekusilela kwisifundo sakho, ukuze abantu bangaphambani, kwaye kuba bengayenzi le folda kunye nabanye, ayizukusebenzela mntu, ilula.
I-Pd, yitsho ukuba ifayile eyimfuneko okanye i-MobileInstallation njengoko i-forero isitsho ukuba sele inokulayishwa kwi-Cydia
roju bacar sitsho
Mholo…. Uxolo lokungazi kwam kodwa, uzongeza njani iimvume kwiifayile?, Nayo yonke enye into esele ndiyenzile kodwa khange ndikwazi ukuyenza loo mvume yeefayile, ukuba umntu angandixelela ukuba ndiyakuba nombulelo ngonaphakade…. Andidibanisi nge-SSH ndisebenzisa iFunbox ... SALU2
Phendula i-roju bacar
Ngaba esi sifundo sive ukufaka kuhlobo 2.1 lwe-ipod touch 1 G? Ngaba ndifuna nje ukufakelwa okushukumayo kwe-2.1 esele iqhekekile?
Ndinengxaki¨: xa ndibuyisela ifayile yokufakelwa kweselfowuni endiyikhuphelileyo xa ndiqala ngokutsha i-iPhone, iyandigcina kwiapile encinci kwaye ayiphumi apho !!!!!!! emva koko kuya kufuneka nditshintshele kwifayile ebesele ndinayo ... ifowuni kwaye ikhona ukuba iyasabela
Inyani yile yokuba iyimbonakalo ebonakalayo, isebenze ngokugqibeleleyo kum. Kulabo baneengxaki, kubalulekile ukuqala kabusha i-ipod / iphone emva kokutshintsha ifowulda yokufakwa kweselfowuni kwaye ube nesicelo esisemthethweni kwivenkile esekwe kwi-iphone / ipod. Ukuba abayenzi le nto, usetyenziso oluqhekekileyo olukhutshelweyo aluyi kulungelelaniswa.
Molo ulungile, ndingumntu omtsha kule nto kodwa xa ndenze onke amanyathelo abekiweyo, ndiyiqalele phantsi iphone kwaye isikrini siba mnyama ngeapile, kutheni le nto, ndingaboni nto, kuphela xa ndiyidibanisa kwi-pc ukuba ibhaqa yonke into kodwa hayi kwi-iphone, uffff, ndincede enkosi kakhulu
Ndinayo yonke into efakiweyo kwaye ndinombuzo
Izicelo zinokuhlaziywa njengabanye okanye ngaba kufuneka uzihlaziye ngokufaka iinguqulelo ezintsha ????
Nam ndifuna ukuyazi lonto
ukuba iiapps zihlaziyiwe,
Molweni nonke, ndiyayityeshela ngokunyanisekileyo imiba emininzi ye-iPhone kwaye ke ndicela intsebenziswano yenu ukuba ichaze ngokweenkcukacha, ukuba kunokwenzeka, uyenza njani inguqulelo yam ye-iPhone 2.2 (5G77) uyisebenzise njengemodem yePC yam esebenza ngeewindows xp.
Ngombulelo, enkosi kakhulu.
Ndinengxaki yokufaka i-cracker, ndilandela zonke iinkqubo kwaye ayiphumeli. Ndiza kulawula, ndithumele umthombo, ndihlelele, ndongeze, ndithumele ukuba ndibuze i-Cydia / i-url efanelekileyo, apho ndibhala iHockulo.us, iposti souce, xa indixelela ukuba ndikhangele kuluncedo andifumani 2 iinkqubo ezizicelayo kwaye emva koko andinakho ukuyifaka, NDICELA umntu andincede, ndifuna ukufaka inkqubo yasimahla, eqhekekileyo ye-itune.
Andazi malunga nawe kakhulu ndandiyi-jaildreame kwakhona kwaye ndisuka kwi-cydia yokukhuphela i-mobileinstalacion kunye ne-ssh ngaphandle kokwenza nantoni na phantsi kweenkqubo ezivela kwi-intanethi. Kwaye emva koko ndiyibeka ivulekile kwi-itunes kwaye yile nto ukuba emva kokukhuphela usetyenziso lwasimahla kwi-iTunes kwaye andiyibeki imvume ye-ipod, iyandisebenzela okanye ndiyikhuphele kwi-hakolus
Ewe, ndiyakhuphela usetyenziso, ndilubeka kwi-iTunes, vumelanisa kwaye kunjalo, kwaye umbuzo wam ngowokuba ukuba kuyasebenza okanye ndenza into engalunganga?
Kwenzeka ntoni zihlobo. Ewe ndihambe kuzo zonke iiforamu kwaye andiyifumani le ndiyenzayo okanye ndithethe ngayo ngekhonkco lokukhuphela i-mobille intallation 3.0 ye-ipas yinguqulelo ye-firmware. Ukuba ukhona kuni olondolozayo ndingavuya.
umbuzo omncinci phantsi kwezicelo eziqhekekileyo kodwa ziyehla kwiifayile ezininzi kwaye andifumani ndlela yokuba nayo nayiphi na impendulo nceda
UJr Spano sitsho
Molo ngokuhlwa ndine-3GS kunye neJailbreak kwaye ndiyayivula kodwa ndiyayifaka i-xSellize kwaye andinakho ukungqamanisa ii-ipas eziHacked uyazi ukuba kutheni ingasebenzi ???
Phendula u-Jr Spano
Molweni, ndinefowuni etshixekileyo endiyithengileyo eMovistar Chile. Ndingathanda ukuyivula ukuze ndikwazi ukufaka ii -apps ngaphandle kokuzithenga kwi-iStore. Ngaba ndingayaphula kwaye ndiyitshixe kwakhona kwixesha elizayo? (umzekelo, uyihlaziya). Ndingathanda ukwazi ukuba inokutshixwa kwakhona ukuze xa kufuneka ndiyise kwinkonzo yezobuchwephesha, akukho ngxaki newaranti. Ngaba inesiphumo?
Ukuba unako ... ungayivula nge-redsn0w ngoku kwaye xa ufuna ukuyivimba, uyibuyisela nge-iTunes njengoko ubusenza njalo ukuza kuthi ga ngoku ... kwelinye icala (ndiyazi ukuba ndiyibonile ndawo, nje ungakhumbuli ukuba kuphi ngoku) kukuba kwifolda kwi-iPhone lonke ulwazi malunga nokusetyenziswa kwayo, ii -apps ezifakiweyo, njl. buyisela ...
I-PS: Ndiyathemba ukuba umntu obona le foramu ukunika idilesi ...
Enkosi kakhulu, ndiyathemba ukubona ukuba omnye umntu ugcwalisa uJr Spano!
Molo ukuba ufuna ukubona ukuba umntu angandicacisela indlela yokubeka iifayile kwi-ipod touch kuba phantsi kwesicelo okanye umdlalo kunye neefayile ezininzi ukuba ungaphendula i-imeyile yam nceda enkosi iphepha le-bna
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba angayibuyisela njani i-iPhone ukuba ufakelo lweselfowuni aluzange lusebenze kwaye isikrini sasekhaya siyabambeka? Andisakwazi ukufikelela kwiifayile ukukopa ifayile yoqobo kwakhona.
Molo ndifuna uncedo. Ndine-cydia kwi-iphone 3g s yam kodwa andikwazi ukufaka usetyenziso oluqhekekileyo, nceda ungandithumelela ikhonkco ukuze ndibone ukuba yenziwa njani? Okanye awunakho ukufaka kwi-iphone 3g entsha?
jonga eli khonkco ...
Kuya kufuneka uyenze le nto uyithethayo ngendlela yesibini ...
Ukuba unayo i-cydia kwii-3gs sele uyikhuphile kodwa wayigqithisa kwi-ultrasn0w kuyo ukuze ukhuphe i-chip ??? Apho unokufumana yonke into ...
Molo, ndingayibeka njani inkqubo efanayo okanye isibhakabhaka esivula imiboniso bhanyabhanya yonomathotholo kwaye yonke into ijongeka njengekhompyuter kuba i-safari iyinto yeselfowuni.
Molweni zihlobo ndiyazibona italente yenu enkulu kule iphone. Ndimtsha. Ndiyathemba ukuba umntu uza kundinika impendulo yokundinceda ... ndiyifumene i-iPhone kwaye ndiyifumene apho umhlobo ayivula khona, wayivula wafaka i-cydia kunye nezinye iinkqubo ezilungileyo kakhulu, inyani kukuba ayichanekanga okanye ukuba ndilahlekile phambi komthetho naphambi koThixo kuba ezinye iinkqubo ziqhekekile kwaye andazi ukuba ndinokuba neengxaki ngeapile okanye into enjalo. Umhlobo wam undixelele ukuba akukho ngxaki ukuba nje abantu abenza ukuba zifumaneke kwiwebhu okanye abo bazisebenzisayo abazenzeli inzuzo.Ndicela ukuba, ukuba ayilunganga, chaza isisombululo ...
Ndingu-newbie kwaye bandixelele ukuba isicelo se-cidia asisebenzi, iyinyani kangakanani
K lolo suku oluhle. Ndifuna nje ukwazi ukuba ngaba kukho ingxaki xa ndicima usetyenziso kwifomathi ye- .ipa kwifolda apho ndibasindisa khona xa ndizikhuphela, ndibuza oku kuba ndiqaphele ukuba ixesha dk abadityaniswa neTunes ligcinwa kwenye ziphi iifolda ezisemthethweni. Ndingathanda ukuyazi le xk njengoko sendinayo ngaphezulu kwe-3 Gb echithwe kwezi zinto ziqhekekileyo .ipa apps Ndingathanda ukuzicima kwiPC yam ukuze ndingaphindi. Ukuba umntu angandinika ulwazi okanye ikhonkco apho livela khona, ndingalixabisa kakhulu. Enkosi !!
Enkosi ngokuvuyisana neforum yakho, intle kakhulu kwaye unike igalelo elilungileyo.
Ifavourote indlela yokwenza i-firmware 2.2! ndincede! ° uphuma mkhulu!
Ndizibeka njani izinto kwi mini iphone? anttony97@hotmail.com ndicela uncede
Molo, bendifuna ukwazi nceda ukuba ezi zixhobo zingasetyenziswanga zingafakelwa na kwiifowuni zam ze-3g ndingakhange ndiyiphule okanye kufuneka ndiyivule kuqala. Enkosi
hey mzalwana, uxolo ndiyaqala ukuvela kwi-iphone endifuna ukuyifaka .ipa izicelo kuyo kodwa phezulu usixelele ukuba sikhuphele i-patched "MobileInstallation" (Khuphela) umbuzo wam uthi ndingayikhuphela phi? Nceda undiphendule, ndiza kukushiya nge-imeyile xa kunokwenzeka uphendule, enkosi
Ndidinga usetyenziso olusayiniweyo lwe-iPhone 5 yam, nceda uzithumele kum
Eyona RSS yabafundi be-iPhone kunye ne-iPad
Eyona nto ibalaseleyo kule veki kwi-iPhone eyiyo